Momba anay - Xinxiang swell Electronic Technology Co., Ltd.
Xinxiang dia mivonto amin'ny Electronic Technology Co., Ltd.dia miorina ao amin'ny peratra ivelany atsimo amin'ny faritra teknolojia avo Xinxiang, voahodidin'ny oniversite sy oniversite, fikarohana siantifika ary rivo-piainana akademika. Amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa 60 ny orinasa, ka ny talenta siantifika sy teknolojia dia mihoatra ny 35%. Ny sehatry ny asa aman-draharaha azy dia manarona ny R&D sy ny varotra fitaovan'ny robot manan-tsaina, vokatra elektrika, zavamaneno maranitra ary metatra, sensor, milina fambolena sy kojakoja; ny fampandrosoana ny vokatra elektrika sy ny lozisialy fandidiana ary ny serivisy fakan-kevitra ara-teknika; ary ny fiasan'ny varotra ivelany sy ny fanondranana ivelany.
Ny base R&D dia mandrakotra an'i Beijing, Shanghai, Nanjing, Shenzhen ary Guangzhou, miaraka amin'ireo tambajotra fivarotana manerana ny firenena. Ny ekipa dia manana ekipa serivisy varotra avo lenta manarona ny firenena iray manontolo, manome serivisy feno, feno ary mailaka ho an'ny mpanjifa amin'ny fotoana rehetra. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny orinasanay dia miomana amin'ny fananganana ekipa mpikaroka fikarohana sy fampandrosoana sehatra manan-tsaina. Amin'ny maha mpisava lalana amin'ny indostrian'ny herinaratra, miantehitra amin'ny firafitry ny maritrano amin'ny fampifangaroana ny fitantanana angovo sy ny teknolojia nomerika, dia nanamboatra vahaolana feno ho an'ny fitantanana kalitao angovo izahay. Ireo rohy telo amin'ny fitantanana ny famotopotorana ny detection dia mamorona loopo mihidy, manome vahaolana sy vokatra matihanina ho an'ny rafitra herinaratra sy ny orinasa mandany herinaratra. Hanao tontolo elektrika azo antoka sy madio kokoa hiarovana ny hery maitso manerantany isika.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manana andian-tsarimihetsika kintana dimy, ao anatin'izany ny fanaraha-maso ny tamberin'ny herinaratra reactive, switch switch sy ny switch thyristor, ny capacitor manan-tsaina ary ny fitaovana amin'ny tambajotra, izy rehetra dia novolavolaina tsy miankina ary novokarin'ny orinasanay, Manana ny atrikasa famokarana maoderina koa ny orinasa fitaovana fanandramana mandroso, fitaovana fanandramana mifanentana elektromagnetika, tsipika fivorian'ny automatique SMT ary sehatra fampandrosoana mahomby, ary koa ny ekipa fampandrosoana sy ny endriny manokana, izay afaka manome toky tanteraka ny fanaraha-maso tsy miankina amin'ny famokarana vokatra vaovao mifanaraka aminy, sy ny fahombiazan'ny kalitao. ary ny singa fiarovana dia azo fehezina tanteraka amin'ny toerany, noho izany ny orinasanay dia manana azy manokana Ho fanampin'ny fananana zon'ny import sy ny fanondranana tsy miankina, ny marika vokatra dia afaka manampy ny mpanjifa any ivelany koa hahatratra ny famokarana OEM sy ODM. Amin'ny taona 2020, ny orinasa dia manana lamina stratejika amin'ny tsena manerantany ihany koa. Ankoatry ny fanondranana ny vokatra sinoa amin'izao tontolo izao dia nanangana efitrano fampirantiana vokatra iraisam-pirenena koa izy. Miorina amin'ny fanafaran'i Shina vokatra vahiny solontena sasany, dia afaka mahatsapa ny fampiroboroboana na ny fiasa sy ny fikojakojana ireo vokatra iraisam-pirenena ao amin'ny fantsom-pandraisana an-tsokosoko ny asa aman-draharaha manafatra sy manondrana tsy miankina.
Mifandraisa aminay, afaka hiara-hiasa izahay hamorona mamiratra.